“Obiara Ntumi Nsom Awuranom Baanu” (Mat. 6:​24) | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Obiara ntumi nsom awuranom baanu . . . Muntumi nsom Onyankopɔn ne Ahonyade.”—MAT. 6:24.
Ɔkwan bɛn so na Bible boa yɛn ma yehu sɛnea ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn abusua?
Sɛ Yehowa nkutoo na yɛsom no a, yɛn gyinaesi na ɛbɛkyerɛ. Adɛn ntia?
Sɛ yɛresi gyinae biara na yɛde Yehowa di kan a, ɔkwan bɛn so na ohyira yɛn?
1-3. (a) Mmusua pii sikasɛm te sɛn nnɛ, na dɛn na ebinom bɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ de asɔ ano? (b) Sɛ obi pɛ sɛ otu kwan gyaw ne ba hɔ a, dɛn paa na ɔtaa dwen ho? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
ABABAA bi a ɔde Marilyn kae sɛ da biara ne kunu James befi adwuma aba no, na wabrɛ ayɛ sɛ nkontommire, nanso ne bosome akatua nnu baabiara. * Na Marilyn pɛ sɛ ɔboa ne kunu na nneɛma mu yɛ mmerɛw ma no. Bio nso na ɔpɛ sɛ wɔn ba Jimmy nya nneɛma a aba so a ne mfɛfo sukuufo wɔ no bi. Afei sɛ Marilyn to n’ani hwɛ n’akyi a, ohu sɛ abusuafo a aka nso hia mmoa, na ɔno koro yi ara na ɛsɛ sɛ ɔboa wɔn. Ɔsan hui sɛ ɛsɛ sɛ onya biribi to hɔ ma daakye. Na ne nnamfo pii atu kwan rekɔpɛ sika wɔ aman foforo so. Enti ɛyɛɛ no sɛ ɔnkɔ bi, nanso na n’adwene nsi no pi. Adɛn ntia?
2 Na Marilyn abusua da ne koma so, enti sɛ ɔhwɛ paa sɛ ɔrebegyaw wɔn hɔ akɔtena obi man so a, na ɛnyɛ no abodwo koraa. Ade biako a na ɛka abusua no bom ne Yehowa som. Sɛ otu kwan a, ɛbɛyɛ dɛn na ɔne wɔn abom ayɛ saa? Nanso ɛwɔ hɔ ara a, na biribi foforo aba ne tirim. Ɛyɛ a ɔka sɛ, ‘Ebinom atu kwan, nso wɔn mmusua da so ara resom Yehowa.’ Nanso ɔsan dwen asɛm no ho bio a, obisa ne ho sɛ, ‘Sɛ mitu kwan a, mɛyɛ dɛn atete Jimmy? Enti merebetumi atete me ba yi wɔ “Yehowa nteɛso ne nyansakyerɛ” mu wɔ Intanɛt so ma ayɛ yiye?’—Efe. 6:4.
3 Marilyn bisaa ebinom adwene. Na ne kunu mpɛ sɛ ɔkɔ, nanso na ɔmpɛ sɛ ɔhyɛ no sɛ ɔnsan. Asafo mu mpanyimfo ne anuanom bi tuu no fo sɛ ɔnsan, nanso anuanom mmea pii tutu guu n’asom sɛ ɔnkɔ. Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wudwen w’abusua ho a, ɛnde wobɛkɔ. Hwɛ, baabiara a wowɔ biara, wubetumi asom Yehowa.” Ɛwom, na Marilyn adwenem ntene no, nanso ɔne James ne Jimmy dii nkra, na otuu kwan kɔɔ amannɔne sɛ ɔrekɔpɛ adwuma. Ɔrekɔ no, ɔhyɛɛ wɔn bɔ sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛba.
ABUSUA ASƐDE NE BIBLE AKWANKYERƐ
4. Adɛn nti na ebinom gyaw wɔn abusua hɔ tu bata? Ɛba saa a, hefo na wɔhwɛ wɔn mma no?
4 Yehowa mpɛ sɛ ne nkoa bedi hia buruburoo. Nokwasɛm ne sɛ efi tete nyinaa, ɛtɔ da a Yehowa nkurɔfo tu bata na ohia ammene wɔn. (Dw. 37:25; Mmeb. 30:8) Wo deɛ hwɛ, bere bi a ɔkɔm kɛse bi sii Kanaan asase so no, Yakob somaa ne mma kɔɔ Egypt sɛ wɔnkɔtɔ aduan mmra na ɔkɔm ankum wɔn. * (Gen. 42:1, 2) Nanso ɛnnɛ nnipa dodow no ara a wotu kɔ amannɔne no, ɛnyɛ wɔn ano aduan na abɔ wɔn nti na wɔkɔ. Ɛtɔ da a na ɛka bi na ɛremene wɔn. Ebinom nso pɛ sɛ wɔn mmusua nya asetena pa, nanso ebia ɔman no sikasɛm nni mmoa wɔn. Enti nea wɔyɛ ara ne sɛ wogyaw wɔn mmusua hɔ kɔtena ɔman no fã baabi anaa wɔkɔtena amannɔne kɔpɛ sika. Wɔn a wotu bata a ɛte saa no taa gyaw wɔn mma nkumaa ma wɔn hokafo anaa wɔn mma mpanyimfo. Ebinom nso gyaw nkwadaa no ma wɔn nana anaa obusuani bi anaa nnamfo mpo. Ɛyɛ wɔn yaw sɛ wɔregyaw wɔn kunu anaa wɔn yere ne wɔn mma hɔ akɔtena amannɔne, nanso wɔte nka sɛ nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ ara ni.
5, 6. (a) Yesu kae sɛ dɛn na ehia na obi ani agye na n’asom adwo no? (b) Honam fam nneɛma bɛn na Yesu kae sɛ n’asuafo mmɔ ho mpae? (d) Ɔkwan bɛn so na Yehowa hyira yɛn?
5 Yesu bere so no, na nnipa pii di hia. Ebia wɔn yam a anka wɔanya sika pii na ama wɔn asom adwo wɔn. (Mar. 14:7) Nanso na Yesu pɛ sɛ nnipa de wɔn werɛ hyɛ biribi a ɛtena hɔ daa mu. Na ɔpɛ sɛ wɔde wɔn werɛ hyɛ Yehowa mu, efisɛ ne nhyira na ɛma obi yɛ ɔdefo daa. Yesu kae wɔ ne Bepɔw so Asɛnka no mu sɛ, sɛ obi benya anigye ne asomdwoe a, nea ehia ne sɛ ɔne yɛn soro Agya no bɛfa adamfo, ɛnyɛ honam fam nneɛma.
6 Yesu kae sɛ yɛrebɔ mpae a, yɛnsrɛ “nnɛ aduan,” kyerɛ sɛ nea yehia da biara; wanka sɛ yɛnhwehwɛ sika ne asetena pa. Ɔkaa no pen sɛ: “Munnyae ademude a mohyehyɛ wɔ asase so no. . . . Mmom no, monhyehyɛ mo ademude ɔsoro.” (Mat. 6:9, 11, 19, 20) Momma yenya awerɛhyem sɛ Yehowa bedi ne bɔhyɛ so na wahyira yɛn. Sɛ Onyankopɔn hyira obi a, ɛnyɛ sɛ ogye no tom kɛkɛ, na mmom ɔma onya nea ohia ankasa. Nokware a ɛwɔ asɛm no mu ara ne sɛ, sɛ obi pɛ anigye ne asomdwoe paa a, nea ehia ne sɛ ɔde ne ho bɛto yɛn soro Agya Yehowa so, ɛnyɛ sika.—Monkenkan Mateo 6:24, 25, 31-34.
7. (a) Henanom na Yehowa de ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔntete mmofra? (b) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ awofo baanu no nyinaa bom tete mmofra no?
7 Sɛ paa sɛ ‘yɛrehwehwɛ Onyankopɔn trenee kan’ a, ade biako a yɛde bɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛma yɛn ani aku yɛn abusua ho sɛnea Yehowa pɛ sɛ yɛyɛ no. Asɛm bi wɔ Mose Mmara no mu a Kristofo betumi de ayɛ adwuma: Ɛsɛ sɛ awofo tete wɔn mma ma wɔsom Yehowa. (Monkenkan Deuteronomium 6:6, 7.) Eyi yɛ asɛde a Onyankopɔn de ahyɛ awofo nsa, ɛnyɛ nananom anaa obi foforo biara. Ɔhene Solomon kae sɛ: “Me ba, tie wo papa nteɛso, na mpo wo maame mmara.” (Mmeb. 1:8) Yehowa pɛ sɛ abusua no tena bom na awofo no nyinaa atumi akyerɛkyerɛ mmofra no. (Mmeb. 31: 10, 27, 28) Sɛ mmofra de wɔn ani hu ɔkwan a wɔn awofo fa so som Yehowa na wɔde wɔn aso te nsɛm a daa wɔka fa ne ho a, wosua nneɛma pii fi mu.
8, 9. (a) Sɛ maame anaa papa bi gyaw abusua no hɔ kɔtena baabi a, dɛn na ɛtaa ba? (b) Sɛ awarefo no mu bi tu kɔtena baabi a, asiane bɛn na ebetumi aba?
8 Ansa na nnipa bi betu bata akɔtena amannɔne no, wogye bere susuw nea wɔbɛfa mu ne ɔhaw a ɛde bɛba ho. Nanso wɔn mu dodow no ara nhu sɛnea akwantu no bɛka wɔn mmusua. (Mmeb. 22:3) * Yɛnsan mmra Marilyn asɛm no so. Bere a otuu ne to kɔe ara pɛ na n’ani gyinaa ne kunu ne ne ba no. Afei na ne werɛ ahow. Ne kunu ne ne ba no nso ani gyinaa no. Daa na wɔn ba Jimmy bisa no sɛ, “Mama, adɛn nti na wugyaw me hɔ?” Mfiase no na Marilyn adwene ne sɛ abosome kakra bi akyi no, ɔbɛsan aba, nanso n’ani baa ne ho so no, na abosome kakra no adan mfe pii. Afei ohui sɛ nneɛma resesa wɔ n’abusua mu, na ehu kaa no. Eduu baabi no sɛ ɔne Jimmy rebɔ nkɔmmɔ mpo a, abofra no ntene ne ho nkasa sɛ kan no. Afei na Marilyn werɛ ahow, na ɔkae sɛ: “Mihui sɛ abofra no nnɔ me bio.”
9 Sɛ awofo ne wɔn mma nte faako a, ɛka wɔn nsusuwii ne wɔn abrabɔ mpo. * Sɛ mmofra no susua na awofo no kohyem kyɛ a, epira wɔn paa. Marilyn ka kyerɛɛ ne ba Jimmy sɛ ne yiyedi nti na watu bata. Nanso abofra no anhu no saa; nea na onim ara ne sɛ ne maame agyaw no asi hɔ atu kwan. Mfiase no, na ɛyɛ no yaw sɛ ne maame nni hɔ. Nanso akyiri yi deɛ, bere biara a maame no befi akwantu mu abɛsra wɔn no, na ne ho yɛ Jimmy ahi. Na Jimmy tebea te sɛ mmofra pii a wɔn awofo agyaw wɔn hɔ atu kwan. Nea ne maame yɛe nti, na onni ɔdɔ mma no na kampɛsɛ watie n’asɛm.—Monkenkan Mmebusɛm 29:15.
Worentumi mmam wo ba nyɛ no atuu wɔ Intanɛt so (Hwɛ nkyekyɛm 10)
10. (a) Sɛ awofo gyaw wɔn mma gu hɔ na nea wɔyɛ ara ne sɛ wɔbɛtotɔ nneɛma abrɛ wɔn a, ɛka mmofra no sɛn? (b) Sɛ maame anaa papa tu kɔtena baabi a, dɛn na ɔrentumi nyɛ mma mmofra no?
10 Marilyn bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛma ne ba no ani agye, enti na ɔtaa totɔ nneɛma de sika ka ho brɛ no. Nanso ohui sɛ ɛno mmom retwe abofra no fi ne ho. Bio, ohui sɛ ɔrekyerɛ abofra no sɛ sika ho hia sen n’abusua anaa Yehowa mpo. (Mmeb. 22:6) Ewiee ase no, Jimmy ka kyerɛɛ ne maame sɛ mma ɔmma bio; ɔntena amannɔne hɔ na ɔmmrɛ no nneɛma. Marilyn tenaa ase susuw asɛm no ho, na ohui sɛ krataa a ɔbɛkyerɛw ne ba no anaa telefon so a ɔne no bɛkasa kɛkɛ no nyɛ kwan a yɛfa so tete abofra. Ampa, na otumi hu ne ba no anim ne no bɔ nkɔmmɔ wɔ Intanɛt so, nanso ɔkae sɛ: “Worentumi mmam wo ba nyɛ no atuu na saa ara nso na worentumi mfew n’ano wɔ Intanɛt so.”
Sɛ wugyaw wo hokafo hɔ kɔtena baabi a, ɔhaw bɛn na ebetumi aba? (Hwɛ nkyekyɛm 11)
11. (a) Sɛ adwuma nti, obi gyaw ne kunu anaa ne yere hɔ kɔtena baabi a, ɛka aware no sɛn? (b) Dɛn na ɛkaa onuawa bi ma ohui sɛ ɛsɛ sɛ ɔsan kɔka n’abusua ho?
11 Aniberesɛm a ɛwɔ asɛm no mu koraa ne sɛ na Marilyn ne Yehowa ntam resɛe. Na ɔtaa toto asafo nhyiam ne asɛnka mu; nnawɔtwe biara na ɔkɔ pɛnkoro anaa ɔnkɔ mpo. Bio nso na n’aware da asiane mu. Na n’adwumawura de nna ho asɛm guan ne ho. Esiane sɛ Marilyn ne ne kunu nte faako a wobesusuw wɔn haw ho nti, na wɔne afoforo na ɛfa adwene, na ɛkaa dɛ anka wɔn baanu nyinaa resɛe aware. Ampa, Marilyn ne ne kunu no mu biara ansɛe aware, nanso ohui sɛ wɔn nan si baabi a ɛhɔ yɛ toro. Bible ka sɛ okunu ne ɔyere ani nnye na wonnya nna mu nkitahodi, nanso bere a okunu wɔ ha na ɔyere nso te nohoa yi, ɛbɛyɛ dɛn na atumi ayɛ yiye? Ɛbɛyɛ dɛn na Marilyn ahwɛ ne kunu anim aso no mu, na ɛbɛyɛ dɛn na ne kunu nso abam no aserew akyerɛ no? Ɛbɛyɛ dɛn na wɔn mu biara akyerɛ ‘ne dɔ’ na wama ne yɔnko “nea ɛsɛ”? (Nmd. 1:2; 1 Kor. 7:3, 5) Afei bere a wɔn baanu nni faako yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔne wɔn ba no abom asom Yehowa? Marilyn kae sɛ: “Bere bi mekɔɔ ɔmantam nhyiam bi na wosii so dua sɛ, sɛ obi betumi anya ne ti adidi mu Yehowa da kɛse no a, ehia paa sɛ ɔyɛ abusua som. Mihui sɛ ɛsɛ sɛ mesan kɔ fie.” Marilyn fii ase siesiee ɔne Yehowa ntam, na ɔhwɛɛ nea ɔbɛyɛ ama n’abusua agyina.
AFOTU PA NE AFOTU BƆNE
12. Bible mu afotu bɛn na yebetumi de aboa obi a watu bata agyaw n’abusua hɔ?
12 Bere a Marilyn sii gyinae sɛ ɔbɛsan akɔ fie no, ebinom bɔɔ n’aba so sɛ wasi gyinae pa, nanso na ɛnyɛ ebinom dɛ. N’asafo mu mpanyimfo kamfoo no sɛ wanya gyidi ne akokoduru sɛ ɔbɛsan akɔ fie. Nanso ebinom a wɔagyaw wɔn abusua hɔ abɛtena amannɔne no tutuu guu n’asom sɛ mma ɔnkɔ. Wɔka kyerɛ no sɛ “Hwɛ, ɛrenni gyina wobɛsan aba. Fie a worekɔ yi, wobɛyɛ dɛn ahwɛ wo ho?” Ɛnsɛ sɛ Kristofo ka nsɛm a ɛte saa de bu wɔn nuanom abam. Mmom ɛsɛ sɛ ‘wɔkae mmabaa ma wɔdɔ wɔn kununom na wɔdɔ wɔn mma, na wɔyɛ fie nnwuma’ de hwɛ wɔn mmusua “sɛnea ɛbɛyɛ a wɔnka Onyankopɔn asɛm no ho asɛmmɔne.”—Monkenkan Tito 2:3-5.
13, 14. Adɛn nti na yehia gyidi na yɛatumi atie Yehowa mmom sen abusuafo? Ma nhwɛso.
13 Wɔn a wɔatu bata yi pii nyaa ntetee bi a ɛka wɔn nneyɛe. Wɔn kurom amammerɛ hwehwɛ sɛ wotie wɔn abusuafo, titiriw wɔn awofo. Enti ehia sɛ Kristoni nya gyidi a emu yɛ den na watumi atie Yehowa mmom sen n’abusuafo.
14 Momma yɛmfa Carin asɛm yi nyɛ nhwɛso. Ɔkae sɛ: “Bere a mewoo me ba Don no, na me ne me kunu yɛ adwuma wɔ amannɔne. Emu hɔ ara na mifii ase suaa Bible. Na m’abusuafo nyinaa rehwɛ kwan sɛ mede Don bɛkɔ fie ma m’awofo ahwɛ no kosi sɛ yɛn sikasɛm bɛyɛ yiye.” Carin ka kyerɛɛ n’abusuafo sɛ ɔno ara bɛtete ne ba no. Ɔkaa saa no, abusuafo ne ne kunu nyinaa dii ne ho fɛw kae sɛ ɔyɛ kwadwofo na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ adwuma boa ne kunu. Carin kae sɛ: “Nokwasɛm ne sɛ saa bere no na m’ankasa mpo nhu mfomso a ɛwɔ ho sɛ mɛkɔ akogya Don wɔ m’awofo nkyɛn mfe kakra. Nanso na minim sɛ Yehowa de ahyɛ awofo nsa sɛ wɔn na wɔntete wɔn mma.” Carin kunu nyɛ Ɔdansefo, na bere a Carin nyinsɛn bio no, ɔbarima no kae sɛ ontu nyinsɛn no ngu. Esiane sɛ bere a edi kan no Carin sii gyinae a ɛsɔ Yehowa ani nti, ɛhyɛɛ ne gyidi den ma osii ne bo sɛ ɔrentu nyinsɛn no ngu. Seesei ɔne ne kunu ne ne mma nyinaa ani agye sɛ wɔabom te faako. Sɛ Carin de abofra biako mpo kɔe sɛ n’awofo ntete no a, anka ebia ɛbɛyɛ asɛm foforo koraa.
15, 16. (a) Ntetee bɛn na onuawa bi nyae wɔ ne mmofraase? (b) Adɛn nti na wampene so sɛ ne babea bɛkɔ tebea a ɛte saa mu?
15 Momma yɛnhwɛ Ɔdansefo bi a ɔde Vicky. Ɔkae sɛ: “M’awofo de me kɔtenaa me nanabea nkyɛn, ɛnna wɔmaa me nuabea kumaa tenaa wɔn nkyɛn. Me ne me nana tenae mfe kakra. Bere a mesan kɔɔ m’awofo nkyɛn no, na mintumi mmɛn wɔn sɛnea ɛsɛ. Ná me nuabea no tumi bam wɔn ne wɔn bɔ nkɔmmɔ sɛnea ɔpɛ, nanso na mintumi ne m’awofo nyɛ saa. Minyinii mpo na mintumi ne wɔn mmɔ nkɔmmɔ nka me komam asɛm nkyerɛ wɔn. Me ne me nuabea no ama yɛn awofo ahu sɛ wɔbɔ akwakoraa ne aberewa a, yɛbɛhwɛ wɔn. Me deɛ ɛyɛ m’asɛde sɛ mehwɛ wɔn enti na mɛhwɛ wɔn, nanso me nuabea no deɛ, ɔdɔ paa nti na ɔbɛyɛ saa.”
16 Vicky kae sɛ: “Nea me maame de yɛɛ me no, saa ara na ɔpɛ sɛ mede yɛ me babea; ɔpɛ sɛ mede me ba no brɛ no na ɔtete no. Memaa ohui sɛ m’ani nnye ho saa.” Vicky ne ne kunu pɛ sɛ wɔn ara tete abofra no Yehowa akwan so. Ɔtoaa so sɛ: “Mempɛ sɛ mɛyɛ biribiara a ɛbɛsɛe me ne me ba no ntam.” Vicky ahu sɛ ade biako a ɛbɛma asi obi yiye ne sɛ ɔde Yehowa bedi kan wɔ n’asetenam na ɔde ne mmarasɛm abɔ ne bra. Eyi ho hia sen sɛ ɔbɛma sika anaa abusuasɛm agye ne ti. Yesu kaa no pen sɛ: “Obiara ntumi nsom awuranom baanu.” Obiara ntumi nsom Onyankopɔn ne Ahonyade.—Mat. 6:24; Ex. 23:2.
YEHOWA MA ESI YƐN YIYE
17, 18. (a) Gyinae bɛn na Kristofo betumi asi? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho wɔ asɛm a edi hɔ no mu?
17 Yɛn Agya Yehowa ahyɛ bɔ sɛ, sɛ yɛde Ahenni no ne ne trenee di kan wɔ yɛn asetenam a, ɔbɛma yɛn nsa aka nea yehia. (Mat. 6:33) Saa bɔhyɛ yi nti, sɛ yɛkɔ ahokyere mu mpo a, ɛnsɛ sɛ yɛma asɛm no bobare yɛn, efisɛ Yehowa ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛma ‘kwan abɛda ho’ na yɛammu Bible mu ahyɛde so. (Monkenkan 1 Korintofo 10:13.) Sɛ ‘yɛtɔ yɛn bo ase twɛn’ Yehowa na yɛbɔ no mpae brɛ yɛn ho ase di n’ahyɛde so a, ɛbɛkyerɛ sɛ ‘yɛde yɛn ho ato no so.’ Yɛyɛ saa a, ɔbɛboa yɛn; ɔremma yɛn nsa nsi fam. (Dw. 37:5, 7) Sɛ yebu Yehowa sɛ ɔno nkutoo ne yɛn wura na yɛde ne som di kan wɔ yɛn asetenam a, obehyira yɛn ma asi yɛn yiye.—Fa toto Genesis 39:3 ho.
18 Sɛ yetu bata gyaw yɛn abusua hɔ a, ɛde nsɛnnennen ba. Ɛnde, dɛn na yebetumi ayɛ de asiesie tebea no? Dɛn na yebetumi ayɛ de ahwɛ yɛn abusua a ɛrenkɔba sɛ yebegyaw wɔn hɔ akɔtena baabi? Dɛn na yebetumi ayɛ de ahyɛ afoforo nkuran na wɔne wɔn abusua atena? Yebesusuw nsɛmmisa yi ho wɔ asɛm a edi hɔ no mu.
^ nky. 4 Bere a Yakob mma no gyaw wɔn mmusua hɔ kɔɔ Egypt no, akwantu no biara nni hɔ a wodi boroo nnawɔtwe abiɛsa. Afei bere a Yakob ne ne mma tu kɔɔ Egypt no, wɔde wɔn yerenom ne wɔn mma kaa wɔn ho kɔe.—Gen. 46:6, 7.
^ nky. 8 Hwɛ asɛm a wɔato din “Wɔn a Wotu Bata—Nea Wɔhwɛ Kwan ne Nea Esi Ankasa” wɔ February 2013 Nyan! mu.
^ nky. 9 Amanneɛbɔ kyerɛ sɛ, sɛ okunu anaa ɔyere gyaw ne hokafo anaa ne mma hɔ kɔtena amannɔne a, ɛde ɔhaw pii ba. Ɔhaw yi bi ne awaresɛe, ɔbarima ne ɔbarima anaa ɔbea ne ɔbea nna, ne mogyafra. Etumi ma mmofra bi yɛ bɔtee anaa nofonofo. Ebinom nso ani so yɛ krakra. Mmofra a wɔte saa ntumi nsua ade yiye wɔ sukuu, na ɛtɔ da mpo a na wɔpɛ sɛ wokum wɔn ho.